Ny fivarotana endrika tsara indrindra 15 sarin-tarehy amin'ny masom-bolo afangaro amin'ny hatsaran-tarehy vita amin'ny palitao tarehy namboarina.
Voalohany:Palette Eyeshadow 15 miloko, ao anatin'izany ny glitter, Matte, Shimmer, Mettallic, eyidesadow iridescent. Loko manankarena amin'ny safidy.
Ity kapila aloky ny maso ity dia manana aloka maso mafana 15, mety ampiasaina mandritra ny andro na milalao. Ampiasao ny volomaso alokaloky ny masonao raha te hanana endrika ivelany matanjaka na sarotra kokoa ianao, mety amin'ny tranga rehetra.
Roa voalohany:Izahay dia mpanamboatra matihanina aloky ny maso. Ny kalitaon'ny vokatray dia azo ampitahaina amin'ny marika lehibe maro, tsara kokoa aza. Azafady, matokia fa hividy ny vokatray. Raha misy olana amin'ny vokatra voaray dia hanompo anao amin'ny fotoana rehetra izahay.
Telo voalohany:Palette Eyeshadow be pigmented, ny vovoka dia malama sy manan-karena maro loko. Mora mifangaro sy maharitra. Tazomy mandritra ny andro ny makiazy.
Powder an'ny aloky ny maso avo lenta: ny vovon-tsolom-bavavavavavavavavavavavavavavola farafahakeliny malefaka sy marevaka be, tsy tantera-drano, fahalemena tena tsara, firaiketam-po mahery. Eyeshadow mora sosona sy afangaro, loko mavo ary loko marevaka marevaka marevaka
Palette ampiasaina be dia be & maharitra maharitra: Mety amin'ny fotoana samihafa, toy ny mahazatra, salon, fety, fampakaram-bady. Singa ara-pahasalamana sy azo antoka ary kalitao tsara. Azo apetaka amin'ny molotra, tarehy, tongotra ary vatana ambony.
Efatra voalohany:Ny kapila aloky ny maso 15 loko no fiadianao miafina hamoronana makiazy tonga lafatra. Ny makiazy tsara tarehy dia mahatonga anao hanana endrika manintona sy manintona kokoa ary afaka manatsara ny fahatokisanao tena.
Eyeshadow malaza 15: mampiasa loko malaza 15 hamoronana endrika tsy manam-petra, mahafinaritra sy mahatalanjona. Mora ny manisy sy mifangaro amin'ny loko pop malefaka, malefaka, malefaka ary malefaka amin'ny fotoana samihafa sy ny endrika fahavaratra rehetra.
Ankafizo ny vokatra maharitra fandokoana maharitra: pigment avo, loko maharitra, tsy mora ny milatsaka sy manidina vovoka. Mety haharitra iray andro izany hanomezana anao traikefa ahazoana aina sy hitazomana ny makiazy aloky ny maso tonga lafatra.
Kolontsaina Super, malefaka ary malefaka: ny lokon'ny crème sy ny loko malemilemy dia mamorona endrika mahatalanjona maro! Ireo kojakoja ara-pahasalamana sy fiarovana, avo lenta, mamorona makiazy tonga lafatra, mitambatra sy mitambatra loko loko, mahatonga ny maso ho mazava kokoa sy feno dimensional telo.
Alokaloka mandinika: mena, mamirapiratra, champagne ary volamena izay mifangaro hanome taratra tsara, duo-chromatic mamirapiratra, azonao atao ihany koa ny mampiasa ny alokay. Tena mandanjalanja tsara sy mafana izany.
Teo aloha: Solomaso maso-BD9-C
Manaraka: Solomaso maso-BD15-COOL
Solomaso maso volamena
Halloween makiazy maso
Solomaso maso voajanahary
Makiazy tsotra amin'ny maso
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Borosy tsara indrindra, Lipotra Mini, Solomaso maso volamena, Matte Eyeshadow Palette, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Lokomena savony, Vokatra rehetra